Matongerwo eNyika, 26 Mbudzi 2019
Chipiri 26 Mbudzi 2019
MDC Yoshora Mapurisa Anonzi Akarova Gweta VaColtart
Bato tinopikisa reMDC nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights ari kushora zvikuru mamwe mapurisa kuHarare Central ari kupomerwa mhosva yekurova gweta rinorwira kodzero dzevanhu VaDoug Coltart.
VeMajeri Votadza Kuita Mabasa Avo Zvakanaka neKushaya Mari
Zimbabwe Prisons and Correctional Services inoti pane zvizvarwa zveZimbabwe zviri mumajeri kune dzimwe nyika zviri kutadza kuuya kuzopedzesa mutongo wazvo mumajeri emuno nekuda kwekuti hazvina magwaro ekuzvarwa kana kufambis
Kubviswa kweRutsigiro rweMari neHurumende muZvimwe Zvitengeswa Kwoomesera Veruzhinji
Zvinhu zvinonzi zviri kuramba zvichiomera veruzhinji munyika kuburikidza nekukwira kwemitengo yezvinonyanyodiwa muhupenyu, zvikuru zvekudya pamwe nemafuta edzimotokari, asi mihoro yevashandi vazhinji isina kwairi kuenda.
Vamwe Voshora SADC neKutadza Kusangana neCrisis in Zimbabwe Coalition
VaChiwenga Vopinda Mudare reMakurukota Kekutanga Mushure meKudzoka kuChina
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika VaConstantino Chiwenga vapinda mudare remakurukota nhasi kekutanga mumwedzi mina mushure mekudzoka kunorapwa kuChina.
Vechidiki veZanu PF Votarisirwa Kuungana muKadoma kuMusangano wePagore
Vechidiki vebato riri kutonga reZanu PF, vari kuungana neChitatu munhandare yeRimuka, mudhorbha reKadoma, kuMashonaland West, uko vari kutarisirwa kuita musangano wavo wepagore.
VaTrump Vanonzi Havana Simba Rekurambidza Vakambovashandira Kuti Vabvunzurudzwe neCongress
Nyaya yekuferefetwa kwaVaDonald Trump iri kuramba ichavaomera mushure mekunge jaji muWashington D.C. atonga kuti VaTrump havana simba rekurambidza vanhu kupa humbowo pamberi pe paramende.
Mbudzi 25, 2019
Hupfu Hwowedzedzerwa Mutengo Zvakanyanya
Mutengo wehupfu hwakwira zvakanyanya mushure mekunge hurumende yati haichabatsire GMB kuti vanhu vatenge chibage chakaderera mutengo.
Vane Vana Matsi Vonetsekena neZvikwanisiro
Vabereki vane vana vane hurema hwekusanzwa vari kukurudzira bazi rehutano kuti rivabatsire nenezvikwanisiro, kana kuti hearing aids.
Zimbabwe Yocherechedza Mazuva Gumi neMatanhatu eKuchengetedzwa kweKodzero dzeMadzimai
Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva gumi nematanhatu akanangana nekuchengetedza kodzero dzemadzimai nevanasikana.
Zimbabwe Human Rights Commission Yoshora Mabharani Mukuru weHuumende
Mabharani mukuru wehurumende VaClemence Masango, vanoti havasi kufara kuti komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu, yeZimbabwe Human Rights Commission, yave kutora divi nekuvashora nevashandi vebazi ravo.
Mutengo weMafuta eKufambisa Dzimotokari Wowedzerwa Zvekare
Zimbabwe Regulatory Authority kana kuti zera yazivisa kuti mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari uri kuwedzerwa zvekare kutanga mangwana.